ကိုကိုဝေလင်းတစ်ယောက် သားကို သတိမှရသေးရဲ့လားမသိဘူး။ သားကတော့ သူ့ကို တစ်နေ့မှ မေ့လို့မရခဲ့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ခေါင်းရင်းဘက်ခြံက မောင်နှမတတွေနဲ့ ဆော့ကစားဖြစ်တိုင်း. “ ကိုကိုဝေလင်းရှိရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ” လို့တွေးမိတယ်။
ထူးထူးတို့မောင်နှမက သိပ်ပြီးအစအနောက်သန်တာပဲ။ အတူဆော့ဖြစ်တိုင်းနှစ်ယောက်သား သားကိုပဲ ၀ိုင်းစနေကြတာပဲ။ သား သူတို့ကြောင့် ခဏခဏငိုရတယ်။ သူတို့ရှေ့မှာမျက်ရည်ကျရတာလည်း ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သူတို့က သားကိုမချော့ကြတဲ့အပြင် အာဗြဲကြီးနဲ့ ၀ိုင်းအော်ပြီး ပိုလို့တောင် စလို့နောက်လို့ကောင်းနေကြသေးတယ်။
“ဒီလောက် စတာလေးနဲ့ ငိုစရာလား။မင်း.... ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလား။”
ထူးထူးရဲ့အစ်ကိုက အဲလိုပြောလာရင် သားရင်ထဲ စူးအောင့်နေအောင်နာတယ်။သူ့ကို သားအစိမ်းလိုက် ၀ါးစားပစ်ချင် တယ်။ မျက်ရည်တွေကုိ လက်ဖမိုးနဲ့ခပ်ကြမ်းကြမ်းကို ပွတ်သုတ်ပစ်ပြီး စိမ်းစိမ်းစူးစူးစိုက်ကြည့်ပစ်လုိက်တယ်။
“အေးလေ........တဆိတ်ရှိ မျက်ရည်ကျဖို့ပဲ။ နင်က အခြောက်လား....ဟုတ်လား”
သားမျက်လုံးထဲမှာ ပြာမှိုင်းသွားတာပဲ သိတယ်။သားကိုယ်မှာ အသိပြန်ကပ်တော့ လူက ထူပူပြီး တဆတ်ဆတ်တုန်ရင်နေတာပဲ။ ဟိုမောင်နှမနှစ်ယောက်လည်း အလဲလဲ၊ အကွဲကွဲနဲ့ ဘယ်အချိန်ကတည်းက ပြေးရောက်လာကြမှန်းမသိတဲ့ လူကြီးတွေက ထူမထွေးပိုက်ထားရပြီ။ ဒဏ်ရာဗရပွနဲ့မျက်ရည်တွေပေလူးပြီး လူကြီးတွေကို တိုင်ကြတောကြပြီ။
သူတို့တတွေ အဲလို ငိုကြီးချက်မဖြစ်နေတာတွေ့တော့ သား အရမ်းပျော်တာပဲ။သားမျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်တွေတောင် ဘယ်လို ခမ်းခြောက်ပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်မသိဘူး။ ရန်ဖြစ်ရပါ့မလားလို့ သူတို့အဖေ၊အမေတွေက ဆူဆူပူပူ၊ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ ပြောနေကြတာကြားနေရပေမယ့် နားထဲဝင်မလာ သလိုပဲ။မေမေ၀ါးခြမ်းနဲ့ ဆက်တိုက်ရိုက်နေလည်း သိသိကြီးနဲ့ပဲ နာရကောင်းမှန်းမသိဘူး။ သားကြောင့် သူတို့တတွေ နာကျင်ငိုယိုကြရတာ မျက်စိထဲကမထွက်ဘူး။ သိပ်ကျေနပ်စရာကောင်းတာပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်နေ့တွေဆိုရင်တော့ သားမှာ အတူတူဆော့ကစားဖို့ အဖေါ်မရှိပြန်ဘူးဆိုတာတွေးမိတော့ ပျင်းစရာ ကြီးပဲ။
“ကိုကိုဝေလင်း ပြန်ရောက်လာရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ...........”
ထူးထူးတို့မောင်နှမနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီးရင် နှစ်ရက်၊သုံးရက်လောက် မခေါ်မပြောနဲ့ စိတ်ကောက်နေကြပြန်ရော....။ အဲဒီိအခါတွေဆို ဟိုမောင်နှမတွေက အခါတိုင်းထက်ပိုပြီး ချစ်ခင်စည်းလုံးနေကြပြန်ပါတယ်။ သူတို့တတွေ သားမြင်သာ တဲ့နေရာမှာ ရွေးပြီးဆော့ကြတယ်။ သားကြားနိုင်လောက်အောင် အသံတွေမြှင့်ပြီး စကားပြောကြတယ်။ သားလည်း သူတို့အရိပ်မြင်တာနဲ့ ပြန်ခေါ်ချင်နေပြီ။ အတူဝင်ဆော့ချင်ပါပြီ။ အချိန်တန်ရင် သားကပဲ ပြန်စခေါ်ရမှာသေချာ နေပေမယ့် မြန်မြန်ကြီးပြန်ခေါ်ပြောဖို့ကြတော့ သားနှုတ်တုံ့နေသေးတာပေါ့။ (သူတို့ကလည်း သားဘက်က စပြီးပြန်လာအခေါ်ကို အိုက်တင်ခံပြီးစောင့်နေတာ သားသိတာပေါ့.။) သူတို့ဆော့လို့ အရှိန်ရလာပြီ။ ပိုပျော်စရာကောင်းလာပြီဆိုရင်တော့ သားလည်းအရေးမလုပ်ချင်ယောင် ဆောင်နေမိရင်းက ခိုးခိုးကြည့်ပြီး မရိုးမရွဖြစ်နေတော့တာပေါ့။
လှမ်းခေါ်မိလုလုပေမယ့် သားစိတ်ကို အတင်းထိန်းချုပ်ထားရတယ်။ခြံနောက်ဖက်က ပိတောက်ပင်ကြီးအောက်သွားပြီး တစ်ယောက်တည်းစကားပြောနေလိုက်တာပေါ့။
“......ကိုကိုရေ၊ မြန်မြန်ပြန်လာခဲ့တော့လေကွာ။ ဒီမှာ ညီတစ်ယောက်တည်းပျင်းလှပြီ။”
“......မင်းပြန်လာရင် ညီနဲ့ ကုိကိုအတူတူဆော့ကြမယ်လေ။ညီ့မှာမေမေ၀ယ်ပေးထားတဲ့ ကော်သေနပ်ရှိတယ်ကွ။ တို့တတွေ စစ်တိုက်တမ်းဆော့ရအောင်လေ။ကိုကိုက ညီ့သေနတ်ကိုယူပေါ့။စစ်ဗိုလ်ကြီးလုပ်..။ ညီ ကတော့ ပျဉ်ပြားသေနပ်နဲ့လည်း ဆော့လို့ဖြစ်တာပဲ။ ညီက လူဆိုးပဲလုပ်မှာပါ။”
“......အင်းပါ။ညီက ကိုကို့ကိုပဲ အနိုင်ပေးမှာပါ။ ကိုကိုက ဒိုင်းကနဲပြစ်ပြီး ညီကိုသေဖို့ပြောရင် ညီသေပေး မှာပါ ဟား..ဟား”
အဲဒီမောင်နှမကို တွေ့ရာခဲသေးသေး တစ်လုံးနဲ့ လှမ်းထုပစ်ခဲ့တယ်။မင်းတို့တတွေ ငါ့ ကိုကိုဝေလင်းပြန်လာမှတွေ့မယ်။
“ပြန်လာမှာပေါ့ ဆွေလင်းရယ်၊ာဘာလို့ ခဏခဏမေးနေရတာလဲ”
“အင်း....ရောက်လာမှာပေါ့၊ သူတို့ က ဟိုးအဝေးကြီးမှာ နေကြတာဆိုတော့ မေတို့ဆီ ချက်ချင်းတော့ ဘယ် ရောက်လာနိုင်ပါ့မလဲ”
“ကိုကို ဝေလင်းက ဘယ်သူတွေနဲ့နေတာလဲမေ”
“ဘိုးဘိုး၊ ဘွားဘွားတို့နဲ့ နေတာလေ၊ဖေဖေ့ရဲ့ အဖေနဲ့ အမေပေါ့။”
“နောက်မှပေါ့၊ ကဲ...စကားမများနဲ့ သားလေးရယ်။ တော်ကြာ ဖေဖေပြန်လာတော့မယ်လေ”
ဟုတ်ပါရဲ့။မေမေ့ကို အမေးအမြန်းထူနေတာနဲ့ ဖေဖေ အိမ်ပြန်လာချိန်ကိုတောင်မေ့တော့မလို့။ ဖေဖေကအိမ်အ၀င်ဝေ၇ာက်တာနဲ့ သားနာမည်ကုိပဲ တကြော်ကြော်ခေါ်လာလိမ့်ဦးမှာသေချာပေမယ့် သားဖေဖေ့ကို နှုတ်မဆက်ချင်ဘူး။ဖေဖေ့ကိုယ်က ချွေးနံ့၊အရက်နံ့တွေနဲ့ ချဉ်စူး နံစော်နေတာမို့ သားကဖေဖေ့အနားမကပ်ချင်ဘူး။သားကိုနမ်းလာပြန်ရင် လည်း သူ့နှုတ်ခမ်းမွှေးကြမ်းကြမ်းကြီးတွေက စူးတယ်။နာလို့အော်မိ၊ ရုန်းမ်ိပြန်ရင်လည်း သားအရိုက်ခံထိဦးမှာ။
အိပ်ယာက နေမြင့်မှ ထလေ့ရှိတဲ့ဖေဖေက မျက်နှာသစ်၊ အ၀တ်အစားလဲပြီးတာနဲ့အပြင်ထွက်တော့တာပဲ။ အိမ်ကမထွက်ခင် မေမေနဲ့သားကုိ နမ်းမွှေးနှုတ်ဆက်ဖို့တော့ သတိရတတ်ပါသေးတယ်။ ပြီး......တစ်နေကုန်အိမ်ပြန်မကပ်တော့ပဲ အချိန်လွန်၊ညဉ့်နက်မှ အိမ်တံခါးကို ခြေကန်ဖွင့်ဝင်လာတတ်တယ်။ မေမေကနံဘေးဝန်းကျင်ကို အားနာလို့ တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်ဖျောင်းဖျမိရင် ပိုဆိုးတယ်။
ဖေဖေ ဘယ်လောက်မူးမူး ၊ သားကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး။
“အိပ်ပြီပေါ့။ ညဉ့်ပဲ နက်လှပြီ.....”
သား အိပ်မပျော်သေးတာ မေမေသိတယ်။ ဖေဖေကလည်း ရိပ်မိနေပုံပဲ။
နှုတ်ကပြောပြီးတဒိုင်းဒိုင်းမြည်အောင် ကိုယ်တိုင်အိပ်ယာထဲ လှမ်းဝင်လာခဲ့တော့တာ။ စောင်ခေါင်းမြိးခြုံအောက်မှာ သားချွေးပြန်နေတယ်။
“ကို၊ မနှိုးပါနဲ့ကွယ်။ ကလေး အိပ်ပါစေ”
“ဘာ...၊အဖေတစ်ယောက်လုံးအိမ်ပြန်ရောက်တာတောင် ထွကိတွေကဖေါ်မရဘူး။ ဒီကောင် ဘာကောင်လဲ။ ဟေ့ ဆွေလင်း.....ထစမ်း ၊ဖျန်း.........”
သား“အားကနဲ” လန့်အော်မိပြီး ချက်ချင်းထ ထိုင်မိတော့တာပဲ။
သူဝယ်လာတဲ့မုန့်တွေ အတင်းစားစေပြန်တာပဲ။ သား စားချင်စိတ်မရှိလည်းပဲ ဇွတ်မြိုချရတော့တယ်။မဟုတ်ရင်......
နားရင်းတီးတာ ခံရပြန်ရော..........။ဖေဖေက စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်လို့ သား ခဏခဏ တွေးမိတယ်။
မေးခွန်းတွေနဲ့ အသက်ရှူကျပ်အောင်လည်း လုပ်တတ်သေးတယ်။ ကောင်းပေကောင်းရဲ့ ပြောနေလျက်ကသား... အပြုအမူ၊ စကားတစ်ခွန်းကို အထအနကောက်ပြီး ထရိုက်တတ်သေးတာ။
“........ဒါပေမယ့် သားတစ်ယောက်ပါ အမေ..........၊အမေတစ်ခု၊သားတစ်ခုမို့ သာပဲလေ...........”
အဲဒီသီချင်းကို သားဆိုခဲ့မိတာ နံနက်ခင်း၊ အဖေအပြင်မထွက်မီ ကြားသွားခဲ့တာပေါ့။နံနက်တုန်းကတော့ ကောင်းပြီကောင်းရဲ့ ခပ်ပြုံးပြုံးထွက်သွားလေတဲ့အဖေဟာ ည အိမ်ပြန်အရောက်မှာတော့..........
“အဲဒီ နိမိတ်မရှိတဲ့ သီချင်းကို မင်း ဘယ်ကရလာတာလဲ။ မင်းက ငါ့ကို သေစေချင်နေတာလား။ ဟုတ်လား........”
သား တွေးနေမိတယ်။ ဖေဖေကို သေတော့ မသေစေချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုကိုဝေလင်းလို အဝေးကြိးကို အကြာကြီးထွက်သွားစေ ချင်မိတယ်။ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့က ဖေဖေနဲ့ ကိုကိုဝေလင်းကို ပြန်လဲပေးရင် ကောင်းမှာပဲနော်။
နောက်နေ့ကျတော့ သား ရောက်နေကျ ပိတောက်ပင်ကြီးအောက်မှာ ဘိုးဘိုးနဲ့ ဘွားဘွားတို့ဆီလှမ်းပြောလိုက်မိသေးတယ်။
“ဘိုးဘိုးနဲ့ ဘွားဘွား...ကိုကိုဝေလင်းကို သားဆီပြန်ပို့ပေးပါနော်။ဖေဖေ့ကိုပဲ ခေါ်ထားလိုက်ပါ။”
“ရန်မရိပ်ငြိမ်”သို့ ကလျာလင်း အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ကျွန်မ တစ်ကြိမ်သာ ရောက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ငှာနတစ်ခုမှ ဦးစီးအရာရှိတစ်ဦးဧသမီးဖြစ်သောကျွန်မသည် ရန်မခရိပ်ငြိမ်သို့ စတင်ခြေချမိချိန်မှစကာ မိမိကိုယ်ကို သေးငယ်သွားတော့သလို ခံစားခဲ့ရသည်။ သစ်ပင်၊ ပန်းမာလ်တို့ဖြင့်ဝေဆာမြိုင်ဆိုင်လှသော ခြံဝန်းကျယ်ကြီးအလည်မှာ ခေတ်မမီတော့သော်လည်း ဟိန်းမားခန့်ထည်ဆဲတိုက်ကြီးက ဟီးထလို့နေသည်။ ထိုနေရာမှာ ရန်မခဧ အရှင်သခင်ဘွားဘွားနှင့် အခြွေအရံများနေထိုင်ကြပါသည်။ဘွားဘွား ၏သားသမီးများက ရန်မခတိုက်ကြီးဧခြေရင်းဘက်မှာ ထိုတိုက်ကြီးဘက်သို့မျက်နှာမူလျက် ပုံစံတူ အစီအရီ လုံးချင်းတိုက် တစ်လုံးစီနှင့်ဖြစ်သည်။
“ဟဲ့ ဒီပုံစံတူလေးတွေက လေးလုံးတောင်မှနော်။ နင့် အဖေတို့က မောင်နှမ သုံးယောက်တည်းရှိတာဆို။ ကျန်တဲ့တစ်လုံးက ဘယ်သူ့အတွက်လဲ။”
စပ်စုတတ်သော ထိုသူငယ်ချင်း၏ အမေးကို ကလျာက မကြားဟန်ပြုနေခဲ့လေသည်။
ကလျာ ဖေဖေနှင့် မေမေတို့က အပြုံးရိပ်၇ိပ်ဖြင့်ကြိုဆိုခဲ့ကြသော်လည်း ထိုအပြုံးတို့တွင် ဖေါ်ရွေနှစ်လိုမှုအချိုးအစား နည်းပါးလွန်းလှသည်ဟု ကျွန်မခံစားမ်ိလေသည်။
ကလျာတို့ အိမ်မှအပြန်တွင် ကလျာကလွဲလျှင် သူ့မိသားစုသည် ခင်စရာမကောင်းဟု တိတ်တခုိးမှတ်ချက်ပြုကာ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မရောက်ဖြစ်တော့။ ကလျာကအလည် ဖိတ်လာခဲ့လျှင်တောင် ဇွတ်ကြီးအကြောင်းရှာပြကာ ကျွန်မရှောင်လေ့မြဲ။
ကျောင်းမှာနေ့စဉ်တွေ့နေရသော ကလျာ့မောင်လေးသည် ကျွန်မတို့ထက် အသက်များစွာ ကွာသော်လည်းကလေးနှင့် မလိုက်သော ကြွစောင်းစောင်းဂျစ်ကန်ကန်ကလေးမို့ ကလျာကိုယ်တိုင်က ကြည့်မရခဲ့ပါ။
အထူးသဖြင့်တော့ ကလျာ့ အစ်ကို ကိုတေဇာလင်းဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖြစ် သိထားသောကိုတေဇာဟ အကြည့်၊ အပြုံးများကို ကျွန်မ မနှစ်မြို့ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အား အရောင်မပါပဲ ဖြူဖြူစင်စင် တစ်ခါတလေတောင် မတွေးမကြံခဲ့စဖူးဟု ထင်ရသည်။ ထို့ပြင် ရန်မခမိသားစုဝင်တိုင်းသည် အပြန်အလှန် အကျွမ်းတ၀င် ၊ရင်းနှီးခင်မင်ဖို့ရန် ၀န်လေးလွန်းလှသလို စိတ်ကထင်နေမိသည်။
ကျွန်မတို့ဆယ်တန်းအောင်သောနှစ်မှာ ဆွေလင်းတို့မိသားစု ရန်မခရိပ်ငြိမ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြတာ ကလျာ့ စကားများအရ သိနှင့် နေခဲ့ပါသည်။ ကလျာ့ဖေဖေမှာ အမှန်တော့ မောင်နှမလေးယောက် ရှိနေခဲ့တာဖြစ်လေသည်။ ဘွားဘွားက သားသမီးလေးလောက်စလုံး၏ အိမ်ထောင်ရေးကို ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်စီမံခန့်ခွဲမည်စိတ်ကူးကာ တိုက်လေးလုံးကို ပုံစံတူစိတ်တိုင်းကျဆောက်လုပ်စေခဲ့သတဲ့။ တကယ်တန်းမှာလည်း ဘွားဘွားဧ သားသမီးများက ဘွားဘွားစိတ်ကျေနပ်လောက်စရာ သြဇာတည်ခဲ့ကြသည်သာဖြစ်ပါသည်။ အင်း.......ဆွေလင်း၏ မိခင်ကလွဲလျှင်ပေါ့။
ဆွေလင်း၏ဖခင်မှာ ပုံမှန်အခြေအနေမှာ စ်ိတ်ထားနှလုံးကောင်းမွန်သူ ၊ အပေါင်းအသင်း ပတ်ဝန်းကျင်းကြားမှာတည်ကြည်ဖြောင့် မတ်သူ၊ တဖက်သားအပေါ် အနစ်နာခံ ကူညီတတ်သူရယ်လို့ ကောင်းသတင်းကျော်စောသော်လည်း သူ မူးပြီဆိုလျှင်တော့သူ၏ဆိုးမျိုးသည်း ညည်းကို ဘယ်သူမှမခံလိုကြပါ။ ဒါပေမယ့် သူ၏အချိန်အတော်များများကိုလည်း မူးယစ်ခြင်းကသာပိုင်ဆိုင်ထားပြန်ရာ ဆွေလင်းတို့မိခင် ကံဆိုးဖို့သာ ဖြစ်လာခဲ့တော့သည်။
ချစ်သူအပေါ် ချစ်သောစိတ်တစ်ခုတည်းဖြင့် အသိုင်းအ၀ိုင်းတစ်ခုလုံးကို စွန့်လျွှတ်ရဲခဲ့သော ဆွေလင်းမိခင်ဧ သတ္တိကိုလည်း အံ့သြ မဆုံးဖြစ်ရသည်။ တစ်သက်လုံးမိဘအလိုကျလိမ္မာခဲ့လေသော သမီးအမွန်သည် တစ်ကြိမ်ဆို....ဆိုသလောက် ရင်ခွင်ကိုခြေစုံကန်လေသောအခါ မာနကြီးလွန်းလှသောဘွားဘွားခမျာ ဆွေ့ဆွေ့ခုန်မတတ်အထိနာခဲ့ရပါသည်။
ဆွေလင်း၏ မိခင်အား သားသမီးစာရင်းမှ အပြီးအပိုင် ထုတ်ပယ်ထားခဲ့တာ ဆွေလင်းအသက်တမျှ မကတော့ပြီ။
ဒါပေမယ့် အချိန်တော့လည်း ဆွေလင်းတို့သားအမိတတွေ ရန်မခအိမ်ရိပ်ကို ပြန်လည်ခိုလှုံ ကြရပြန်သည်ပင်။ဒါပေမယ့်..........
“မိုက်ဇာတ် သိမ်းသွားပြီဆိုလို့ တစ်မီးငြိမ်းမလားမှတ်ပါတယ်။ အဆွယ်အပွားကထားခဲ့ရသေးတယ်လေ။ သင်းသွေးပါတဲ့ဟာကလေးကရော ဘာထူးဦးမှာလဲ။ ဘမျိုးဘိုးတူလာဦးမှာပေါ့။”
ဆွေလင်းခြောက်တန်းနှစ် အရောက်မှာ သူ့အားstudy guideပေးရန် ကျွန်မကို စတင် ကမ်းလှမ်းခဲ့စဉ်က ဘွားဘွား၏ စကားများဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ ဆွေလင်းက ဘွားဘွားပြောသလို လူဆိုးလေးမဟုတ်ရှာသလိုဘွားဘွားသည်လည်း ဆွေလင်းအား နှုတ်စကားတို့နှင့် ဆန့်ကျင်စွာ ဥပက္ခာမပြုရက်ခဲ့တာ ကျွန်မရိပ်မိနားလည်နေပါသည်။
“အမြင်မတော်တာတွေ့ရင် ဆုံးမပါ ဆရာမရယ်။အပ်ပါတယ်။ မလိမ္မာလို့ကတော့ ကျုပ်က အမေရော၊သားရော အိမ်ပေါ်မှာ မထားဘူး။ ရိုက်ချမှာ..........”
ဘေးအမြင်မှာတောင် နားထဲနင့်နေစေမည့်စကားကို ဘွားဘွားက ဆွေလင်းတို့သားအမိအတွက် သီးသန့်ကို သုံးစွဲပြောဆိုနေတာဖြစ်သည်။ ဆွေလင်းတို့သားအမိမြင်လျှင် စိတ်အနာတွေအသစ်ဖြစ်ကာ တဖျစ်တောက်တောက် မြည်တွန်လေ့မြဲမို့ ဆွေလင်းက ဘွားဘွားကိုရှောင်ကာ အခန်းအောင်းနေ လေ့ရှိပါသည်။ ထိုအခါဆွေလင်းကိုမမြင်လျှင် နေမထိသော ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်သတိမပြုမိခင်အခေါ်လွှတ်ကာ မြည်တွန်ဆူပူပြန်တော့သည်။
ရန်မခ၏ သြဇာအတည်ဆုံး ဘွားဘွားကမှ မျက်နှာသာမပေးဘူးဆိုတော့ ကျန်အရိပ်ခိုသူအချင်းချင်းက ဆိုစရာမရှိတော့ပြီ။ ဆွေလင်းမို့နာမည် ကြားလျှင်တောင် ရန်မခတစ်ခြံလုံးက ၀ိုင်းဝန်းနိုင်စားဖို့သာ တွေးမိတော့သည်အထိဖြစ်သည်။ ရန်မခသို့ ကျွန်မ ရောက်ရှိခဲ့ရသည်မှာလည်း ထိုဆွေလင်းအား ၀ိုင်းပယ်ကြသော အကြောင်းရင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ဆွေလင်းနှင့်အတန်းတူ မောင်နှမ၀မ်းကွဲသုံးယေက် စာသင်ဝိုင်းတစ်ဝိုင်းပြုလုပ်ရန် ဘယ်သူကမှ လက်မခံလိုခဲ့ကြပေ။
ဆွေမျိုရင်းချာများကြားမှာ ခုလိုစိတ်ဝမ်းကွဲပြားနေတဲ့ အဖြစ်အပေါ် ဘွားဘွားအမြင်မတော်သော် ၊ သဘောမတွေ့သော်လည်း ဆွေလင်းတို့သားအမိ ဘက်မှ ကွယ်ကာပြောဆိုပေးရာ ရောက်မှာစိုးသောကြောင့် နှုတ်တုံ့နေမိသည်။
“ဘယ်သူနဲ့မှ မရောရတော့လည်း ကောင်းတာပဲ။မင်း...သူတို့အားလုံးထက်ပုိတော်အောင်ကြိုးစား”
အသံတုန်တုန်ကိုထိန်းရင်း ဝေ့ခနဲ ၀ဲတက်လာသော မျက်ရည်တို့ကို မျက်နှာပင့်မောကာ မျ့က်တောင်တဖျတ်ဖျတ် ခတ်ထုတ်ပစ်နေသေးသည်။ ပြီး ...ခပ်တိုးတိုးဆိုသေးသည်မှာ...
“မြေးချင်းအတူတူပါပဲဆရာမရယ်။ဒါပေမယ့် သူ့ကုိတော့ ပိုဂရုစိုက်ပေးပါ”
ဆွေလင်း၏ ထူးခြားချက်မှာ အမြဲတွေးတွေးငေးငေးဖြင့် နွမ်းမှိုင်ငြိမ်သက်လွန်းခြင်းပဲဖြစ်သည်။ စာသင်ချိန်မှာတော့ စူးစူးစိုက်စိုက် စိတ်ဝင်တစားရှိတတ်ပါသည်။ ဥာဏ်လည်း အလွန်ကောင်းပါသည်။ ထိုးထွင်းသိမြင်သော အမြော်အမြင်မျိုးလည်း သူ့စရိုက်သဘာဝမှာ ပေါ်လွင်သည်။ ဆွေလင်းအဖို့ ရန်မခတို့ကို ရှောင်ဖယ်ရန် နည်းလမ်းမှာလည်း အခန်းအောင်း၍စာအော်ကျက်နေခြင်း၊ အတွက်ပုစ္ဆာတစ်ခုဖြင့် အလုပ်ရှုပ် နေခြင်းသာဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် တခါတရံ ကျွန်မရှင်းပြနေသော သင်္ခန်းစာတစ်ခုကို ခေါင်းကြီးအောက်စိုက်ကာနားထောင်နေရင်း မျက်ရည်တွေ စာရွက်ပေါ်တဖေါက်ဖေါက်ကျလာလေမှ ကျွန်မ အထိတ်တလန့်ဖြစ်ရတာတွေ ရှိသေးသည်။
တခါတရံ သူ၏ ၀မ်းကွဲမောင်နှမ၊ညီအစ်ကိုများက မတူမတနသလို နှိမ်ချစော်ကားလိုက်ကြလို့ ဆိုတာတွေလည်း ကြားရတတ်သေးသည်။
ကျွန်မရန်မခမှာ ဆွေလင်းကိုစာသင်နေသော သုံးနှစ်အတွင်းမှာ ဆွေလင်း၏ မိခင်ကိုမြင်တွေ့ရခဲလှပါသည်။ သူမသည် ရန်မခရိပ်ငြိမ်သုိ့ ရောက်ပြီးကတည်းကတရှောင်ရှောင် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတတ်သည်။
တခါတော့ သူ၏ မေမေ အတော်နေမကောင်းဟုဆိုကာ ဆွေလင်း ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုလေသောကြောင့် ကျွန်မ သူ၏မိခင်ထံ လူနာသတင်းမေး ရောက်ခဲ့ရပါသည်။
အန်တီ ဒေါ်ခင်မေလတ်မှာ ဖြူရော်ရော် ပိန်ပါးကာလှပ်လှပ်ယဲ့ယဲ့ကလေးသာ ရှိလေသည်။
“မေမေဆူတာပြောတာ အန်တီ ခံနိုင်ပါတယ်၊။ အငယ်တွေကအစ တနွယ်ငင်တစင်ပါ အားလုံးကအရိုသေတန်ကြတာ၊ လူရာမသွင်းတာကျတော့ ခံပြင်းလို့မဆုံးဘူး။အံလည်းသြမိတယ်...”
တိုးသဲ့သောလေသံမှာပင် မာနရိပ်ကလေး အထင်းသား။ သူမသည်လည်း ရန်မခရိပ်ငြိမ်မှ မာနမင်းသမီးတစ်ယောက်အဖြစ် လျှမ်းလျှမ်းတောက်ခဲ့ပေလိမ့်မည်။
“ဒီကိုပြန်လာတာ ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆရာမ။ ဆွေလင်းရဲ့ရှေ့ရေးအတွက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ကူးတွေမှားသွားပြီ ထင်ပါရဲ့။ ဆွေလင်းခမျာ တစ်နေ့မှစိတ်မချမ်းသာခဲ့ရပါဘူး။ ဆွေမျိုးတွေကြားပြန်ရောက်မှပဲ သူစိမ်းတွေကြားမှာထက် စိတ်ကျဉ်းကျပ် ပင်ပမ်းဆင်းရဲရတော့တာ...........”
“သူ့အဘွားက ပစ်ပစ်ခါခါလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ အန်တီအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အန်တီသာမရှိတော့ရင်ဆိုပြီး ဒီသားလေးကို စိတ်မချနိုင်ဘူး ဆရာမရယ်”
ချိုင့်ခွက်မျက်ဝန်းများမှ စိမ့်အိုင်ပြည့်လျှမ်းလာသော သူမ၏မျက်ရည်များကို ကျွန်မ မမေ့ရက်ခဲ့ပေ။
သူ့မိခင် ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားခြင်းက ဆွေလင်းအား အတော်အထိနာစေခဲ့ပါသည်။ ဆွေလင်းသည်အိပ်ယာထဲမှာ တစ်ပါတ်ခန့်လဲသွားရ တော့သည်။ အစားအသောက်လည်းမ၀င်။ ချော့မော့ကျွေးလုိ့မရ။ အိပ်ယာပေါ်မှာပဲ တခွေခွေ၊တညိုးငယ်ငယ် နေလေတော့သည်။ ညပိုင်းတွေမှာ မအိပ်ပဲတစ်ယောက်တည်း တတွတ်တွတ်ဆိုနေတတ်သေးသည်ဟု အိမ်အကူမိန်းမကြီးတစ်ယောက်က ပြန်ပြောသဖြင့်သိရသည်။ ကျွန်မ ပြန်မေးတော့....
သူနာလန်ထလာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ဟိုအရင်ကထက်ပင် ကြည်လင်ရွှင်လန်းနေပြန်သေးသောကြောင့် ထူးခြားမှုကို သတိပြုမိ၊ အံ့သြတကြီး ဖြစ်မိရပြန်သည်။
သူ ပြုံးလျှက်သာ ခေါင်းခါပြသည်။
တစ်နေ့.....ကျွန်မ သူတို့အိမ်သို့ စာသင်ရန်အရောက်၊ ဘွားဘွားက ဆွေလင်းအား ဆူဆူပူပူပြုနေတာနှင့်ကြုံရပြန်သည်။
“ဇေယျာတို့နဲ့ သုံးယောက် တစ်ယောက် ဖိုက်တင်ချကြတာ ဘွားဘွားသိသွားလို့”
“သားမဟုတ်ဘူးဆရာမ။ ဟိုကောင်တွေရသွားတာ။ သား ဘယ်လိုလုပ်လိုက်မိမှန်းတောင်မသိပါဘူး။ အာလူးသီးတဲ့လူနဲ့။ ဒူးပြဲတဲ့လူနဲ့.....”
ကျွန်မတလျှောက်လုံးသိလာတဲ့ ကြောက်ဆုတ်ဆုတ်၊ ရွံ့တွန့်တွန့်ဆွေလင်းကြောင့် ဟိုကလေးတွေအနာတရဖြစ်ကုန်ကြရတာ ကျွန်မ ကိုယ့်နားတောင် ကိုယ်မယုံချင်။
“ဘဘနဲ့ ကြီးကြီးတို့ရော၊ လေးလေးတို့တွေပါ အမျိုးတွေ တတ်နဲ့ချီပြီးသားကို သတ်ဖို့လာကြတာ....။ဘွားဘွားသာ မရှိရင် သားတော့သေပြီ။”
ဘုရား...။ ဒါပေမယ့် ဆွေလင်းကတော့အေးဆေးနေမြဲပင်။
“နောက်တစ်ခါ ရန်မဖြစ်ပါနဲ့ဆွေလင်းရယ်။ ဆရာမပြောတာ နားထောင်နော်”
“သားကတော့ စမဖြစ်ပါဘူး။ သူတို့က အလကားနေရင်းလည်း လာလာစနေကြတာ...”
“သား ရှောင်လို့မ ရဘူး ဆရာမ။ လူကြီးတေါကို ပြန်တိုင်လို့လည်းမရဘူး၊။ သူတို့ကိုယ်တိုင်က မြှောက်ပေးနေကြတာ တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။။ သားကတော့ ဘွားဘွားရိုက်ချင်လည်းရိုက်ပစေ၊ ပြန်ချတော့မှာပဲ”
“ဟဲ့ ........... ”
ဆွေလင်းမှာ ဘယ်အချိန်က ဘယ်လိုသတ္တိတွေဝင်ရောက်လာခဲ့သလဲ။
“ကိုကို ဝေလင်းကပြောတယ်။ ပြန်မချရင် စကြောက်တဲ့။ပြန်သာတီး၊ဦီးအောင်ဆော် တဲ့ ။ သားကိုထိရင် သူပါ ၀င်ကူပေးမယ်တဲ့။”
ကိုကိုဝေလင်း...........။ ထိုအမည်ကို ကျွန်မ တခါမှ မကြားဖူးခဲ့ပါ။
“ဘယ်က ကိုကို ဝေလင်းလဲ”
``သားရဲ့အမြွာ အစ်ကိုလေ။ ငယ်ငယ်လေးထဲက ဖေဖေ့ဘက်က ဘိုးဘိုး၊ဘွားဘွားတို့နဲ့သွားနေတာ...။ဒီက ဘွားဘွားကို ပြန်မပြောနဲ့နော်။ဘွားဘွားကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး”
``ကိုကို ဝေလင်းက သားလိုမဟုတ်ဘူး။ သတ္တိသိပ်ကောင်းတယ်။သားလည်းသူ့လို သတ္တိမျိုး ရှိချင်တယ် ဆရာမ။ သူကပြောတယ်။သတ္တိရှိချင်ရင် ပြန်ချတဲ့။ သားက ပြန်ချတော့မယ်”
“နေဦး မင်းက သူနဲ့ ဘယ်မှာတွေ့တာတုန်း”
“ကျောင်းမှာ........၊ ကိုကိုဝေလင်းက သားကို ကျောင်းမှာ လာတွေ့တာ။”
“ကြာလှပြီ။ ဟိုအရင်တုန်းကတော့ အကြာကြီးနေမှ တစ်ခေါက်လာတွေ့တာ။ မေမေဆုံးပြီးနောက်တော့ ခဏခဏ လာတယ်။”
ခပ်ပြုံးပြုံးပြောနေတဲ့ ဆွေလင်းရဲ့ ပိုင်နိုင်သေချာဟန်မျိုး ယခုတစ်ကြိမ်သာ မြင်တွေ့ဖူးသည်မို့ ကျွန်မ ငေးခနဲတောင် ဖြစ်ရသည်။
အဲဒီနေ့က ရန်မခသို့ ကျွန်မရောက်သွားချိန်မှာ ဆွေလင်းကျောင်းကပြန်ရောက်မလာသေးပေ။ သူ ဒီနေ့ ကျောင်းဆင်းနောက်ကျမည့် အကြောင်း ကျွန်မကိုကြိုတင်ပြောမထားခဲ့ပါ။
ပူပန်တတ်သော ဘွားဘွားကတော့ သူမ၏ သောကတို့ကိုတဖျစ်တောက်တောက် မြည်တွန်ရေရွတ်ခြင်းဖြင့် ပုံဖေါ်နေပါသည်။ ဘွားဘွားသည် စိတ်မာန်ကြီးသောလူကြီးပီပီ ဆွေလင်း အိမ်ပြန်နောက်ကျသော အပြစ်ကိုပုံကြီးချဲ့ကားရင်း ဆွေလင်း၏ အဖေအမေတို့အပေါ် အခဲမကျေနိုင်သေးသောအနာ ဟောင်းများကိုပါ ဇာတ်ကြောင်းပြန်နေတော့တာမို့ ကျွန်မဆွေလင်း၏စာကြည့်ခန်းက စောင့်နေတာ ပိုကောင်းမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်မိသည်။
စာကြည့်ခန် တံခါးကို ဆွဲအဖွင့်..ကျွန်မ ထိတ်ခနဲလန့်သွားရပါသည်။
အရေးမထားဟန် ပေါ့ပါးသော သူ့အကြည့်အပြုံးတို့ကို ကျွန်မ မကြိုက်ပါ။
“ရပါတယ်ကိုတေဇာ။ ကျွန်မ ဆွေလင်းကို အပြင်ကပဲ ပြန်စောင့်ပါမယ်။”
သူ ကျွန်မရှေ့ကို လှစ်ခနဲ ရောက်လာခဲ့လိမ့်မည်ဟု ကြိုတင်တွေးမထားမိတာ ကျွန်မ၏ ပေါ့လျော့မှုပဲဖြစ်သည်။
“နေပါဦး သီရိရာ၊ ကိုယ် မင်းကို စကားနည်းနည်းလောက် ပြောချင်လို့ပါ”
“ပြောစရာရှိတာ ဧည့်ခန်းထဲမှာပဲ ပြောကြတာပေါ့ ကိုတေဇာ”
ပိတ်ရပ်ထားသောသူ့ကို ကွေ့ရှောင်ကာ ကျွန်မ လှမ်းထွက်ရန်ပြင်သည်။
“ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ ကိုတေဇာ”
ကျွန်မ ထောင်းခနဲ ဒေါသ ထွက်လာသော်လည်း ခပ်ကြိတ်ကြိတ်သာ ပြောဖြစ်သည်။ ဆုတ်ဆွဲထားသောလက်အစုံကို အနည်းငယ်ဖြေလျော့ပေးရုံသာမို့ ကျွန်မ ကျိတ်ရုန်းသော်လည်း မလွတ်သာ။
“ကိုတေဇာ ကျွန်င်္မကို လွှတ်လို့ ပြောနေတယ်နော်”
ကျွန်မ အတော်ဒေါသ မွှန်နေပြီ။ထိုစဉ်.....
“ဟာ..ဆရာမ၊ ဟင် ...ကိုတေဇာ.......´´
ကျွန်မကျောင်းသား၏ရှေ့မှာ ခုလို မဖွယ်မရာ အခြေအနေမျိုးနှင့် လာရင်ဆိုင်ရတာမို့ ဆူဝေလာသောဒေါသဖြင့် ကျွန်မအားကုန်သုံးကာ ဆောင့်ရုန်းပစ်လိုက်သည်။ မျက်ရည်တွေ ၀ဲခနဲ ဝေ့တက်လာကြပြီ။
“ကိုတေဇာ ဆရာမကို လွှတ်လိုက်တော့လေ”
ဆွေလင်းက ကိုတေဇာ့ကိုတော့ အရွယ်ချင်းလည်းကွာကာ နဂိုကတည်းက ခပ်ရှိန်ရှိန်မို့ မယုတ်မလွန်ဝင်ပြောသည်။
ကိုတေဇာ့မျက်နှာ သပြေမှည့်ရောင်ညိုလေသည်။ ဆွေလင်းမျက်နှာလည်း ရဲရဲနီနေတော့ပြီ။
“ကိုတေဇာ၊ သား ဘွားဘွားနဲ့ပြန်တိုင်မှာနော်“
ကိုတေဇာနှုတ်မှဖရုဿဝါစာတွေမဆုံးလိုက်နိုင်။ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ကြားသို့ ဆွေလင်းလွှားခနဲ ခုန်အုပ်ဝင်ရောက်လာပုံက လေလိုလျှင်မြန် လွန်းလှသည်။ ကိုတေဇာ အားခနဲ အော်လျက်ပုံလျက်လဲသွားသည်။ မျက်နှာပေါ်မှာသွေးနီနီတို့ ဖြာခနဲ။ သူ့လက်မှလွတ်မြောက်သွားသော ကျွန်မသည် နောက်သို့ တစ်ချက်ခုန်ရှောင်လိုက်မိကာ....
ဆွေလင်းက မရပ်ပဲ ကိုတေဇာ ရင်ဘတ်ပေါ်ခွစီးကာ ကော်လာစ နှစ်ဘက်ကို စုကိုင်ဆွဲညှစ်နေပြန်သည်။
၇န်မခ နယ်မြေမှာ ကျွန်မ၏ သံကုန်သံပြာ အော်ဟစ်သံတွေ ညံသွားတော့သည်။ အုန်းတသဲသဲ ဆူဆဲအော်ဟစ်သံတွေကြားမှာ ဆွေလင်းရော.....။ ဆွေလင်းအတွက်ပူပန်ဖို့ ကျွန်မ သတိရတော့ သူ့ကိုမမြင်ရ၊ ဆွေလင်းရေ......။
ကိုတေဇာ၏ ဦးခေါင်းကို သူထုချလိုက်သော သစ်သားပန်းပု ၇ုပ်က သူ့နံဘေးမှာလဲလျက်။
“ဆွေလင်း ဟေ့ကောင်။ မင်းဒီနေ့ အသေပဲ”
ရန်မခ အုပ်စု၏ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းသံတွေကြားမှာ ဟိန်းခနဲ ရယ်မောခနဲ့သံ။ဘုရားရေ....။အဲဒါ ဆွေလင်းလား....။
“ဟား....ဟား....ခင်ဗျားတို့နိုင်ချင်တိုင် နိုင်လို့ရတဲ့ ဆွေလင်း မရှိဘူး ။ကျုပ်နာမည် ဝေလင်း၊ ဆွေလင်းရဲ့ အစ်ကို ဝေလင်း....”
“လာ...ကပ်ရဲကောင် ကပ်လာကြည့်။ အသက်ချင်း လဲပြစ်မယ်”
“မခေါ်နဲ့။ ကျုပ် ဆွေလင်းမဟုတ်ဘူးဆို”
ဟင့်အင်း။ သူ ဆွေလင်းပါ။ ကျွန်မသိတယ်။ ကျွန်မ မသိနိုင်တာက ၇ုတ်တရက်ကြီး ခက်ထန်ရိုင်းကြမ်းသွားတဲ့ သူ့အပြုအမူတွေ....။
ဘွားဘွားနှင့် ကျွန်မ ကြိုတင်တိုင်ပင်ထားသည့်အလား သူ့အနားရောက်သွားတော့....
ဘွားအသံတုန်ခိုက်ကာမျက်ရည်ဖြိုင်ကျလာတာကို ငေးခနဲတွေဝေသွားသလို သူမင်သက်နေဆဲ......။ ဘွားကဇွတ်ကြီးပင် သူ့ထံပြေးဝင်ကာ သိုင်းအဖက်၊ ဆွေလင်းတစ်ယောက်ကျောက်ဆစ်တစ်ရုပ်လို တောင့်တင်းအေးစက်နေတော့ပြီ။
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ညီ နည်းနည်းတော့ ကြောက်နေမိသေးတယ်ကိုကို။
ဒါပေမယ့် အရေးအကြောင်းကြုံလာရင် မင်းရောက်လာမှာပဲဆိုတာ ယုံကြည်ထားတော့ အေးဆေးပဲ။
ခုဆိုရင်ညီံကို လေကျယ်နေကျ ရန်မခညီနောင်တွေအကုန်လုံး ညီ့ကို ဖြုံနေကြပြီ ဟား.....ဟား....။ သူတို့ရဲ့ ဆရာကြီး ကိုတေဇာ တစ်ယောက် လည်းခေါင်းပေါင်းအဖွေးသားနဲ့ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေပေမယ့် မလှုပ်ရဲရှာဘူး။ ညီကိုထိရင် ရန်မခကနေခေါင်းနဲ့ဆင်းရမယ်လို့ အားလုံးကို ဘွားဘွားက တစ်ချက် လွှတ်အမိန့်ထုတ်ထားလိုက်ပြီလေ။ဒီလိုဆိုတော့ ဘွားဘွားက သားကိုချစ်လို့နေမှာပေါ့နော်။
သားဘက်မှာ ဘွားဘွားနဲ့ ဆရာမ ၇ှိနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ရန်မခက နေပျော်စရာ ဖြစ်နေသေးတာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ကိုကို ညီ့ဆီ မကြာမကြာတော့ လာတွေ့နော်။ ညီ....မင်းကို မျှော်နေမယ်။
အဲဒီ ဒေါက်တာမျက်မှန်ပေးတဲ့ ဆေးတွေသောက်တိုင်း သားအရမ်းအိပ်ငိုက်တော့တာပဲ။
ခုလည်း သူပေးထားတဲ့ဆေးတွေ သောက်နေရဆဲ ....မျက်ဝန်းရှေ့မှာလှုပ်လှုပ်လွှဲလွှဲလုပ်နေတဲ့ ချိန်သီးကလေးနောက် အကြည့်တွေလိုက်ပါရင်း သားအိပ်ငိုက်လာပြန်ပြီ။
“သားရဲ့ အမြွာ အစ်ကုိ”
“သား.............. မသိဘူး။ကိုကိုက.....ကိုကိုက...သေသွားပြီ။အသက်ငယ်ငယ်မှာပဲသေသွားခဲ့တာ တဲ့။ သား မမှတ်မိပါဘူး။ မေမေကလည်းမပြောခဲ့ဘူး။ဘိုဘိုးဘွားဘွားတို့နဲ့ သွားနေတယ်လို့ပဲ သားသိထားတာ။“
”ခုမှ....၊ရန်မခကိုရောက်မှ မေမေက အမှန်အတိုင်းပြောတာ..............”
Posted by သတိုး at 7:26 PM2comments:
Gtalk boxပွင့်လာတာနဲ့ တပြိုင်နက် အဦးဆုံးတက်လာခဲ့သော နှုတ်ခွန်းဆက်စကား။
တကယ်လည်း ဒီနေ့အဖို့ စိတ်ကူးရည်ရွယ်ချက် မည်မည်ရရ ရှိမနေပါပဲ သူ..လိုင်းပေါ်ရောက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါသည်။
အခါများစွာတုန်းကတော့ ၀တ္ထု၊ ကဗျာလေးတွေ ရေးနေဖြစ်ကာ ၀တ္ထု၊ ကဗျာ ပို့စ်အသစ်တင်ဖို့ ရောက်နေတတ်တာ များပါသည်။ ပြီး...ကိုယ့် personal webpage ကလေးကို အလှဆင်ရန်၊ လိုအပ်သော buttonလေးတွေ တပ်ဆင်ရန်...ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုးနှင့်လည်း ရောက်ဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ဘလော့ဂ် စာမျက်နှာဆီ အလည်ရောက်လာ၊ စာတွေလာဖတ်ပေးကြသော သူငယ်ချင်းတွေထံ လျှောက်လည်မည်။ ကွန်မန့်ရေးခဲ့မည်။ ကိုယ့်ဧည့်ခန်းစာမျက်နှာမှာ...၊ ကိုယ့်ဝတ္ထု၊ ကဗျာ ပို့စ်တွေမှာ မှတ်ချက် (comment) ပေးခဲ့တာလေးတွေဖတ်ကာ ပီတိတဝေေ၀ဖြင့် reply ပြန်ရပေဦးမည်။
နေ့ရက်၊နာရီများစွာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘလော့ဂ်ရေးကာ ပျော်မောမွေ့လျော်နေမိရင်း သူ...အာရုံတွေ ညောင်းချိလာခဲ့ပြီလားမသိ။ သူ့ ဦးခေါင်းထဲမှာ စာတစ်ပုဒ် ထွက်ကျလာရန် အလွန်အမင်း ခက်ခဲပင်ပန်းလွန်းခဲ့ ပြီ။
``အစ်ကို့ ကဗျာ၊ ၀တ္ထုအသစ်တွေ မဖတ်ရတာကြာပြီ´
``ကျေးဇူးပါ ညလေးရာ။ ကိုယ် ကြိုးစားရေး ပါဦးမယ်´´
ဒါပေမယ့် ဒီရက်တွေထဲမှာ စာတစ်ကြောင်းတလေတောင် ရေးမရနိုင်တာကြောင့် တစ်ကိုယ်တည်း စိတ်တွင်းတိုက်ပွဲတွေ နွှဲနေခဲ့ရတာ မခံချိချင်စရာပေ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘလော့ဂ်ရေးနေသူတို့၏ ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရယူထားသော ၀ဋ်ဒုက္ခမှာ ကိုယ့် webpage (ဘလော့ဂ် စာမျက်နှာ) တွင် စာအသစ် မတင်နိုင်တာ ရက်အနည်းငယ်ကြာလျှင် စိတ်လက်မအီမသာနှင့် နေမထိတာပဲ ဖြစ်သည်။ webpage (ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာ) ဆီ ရောက်လာစာဖတ်နေကျ မိတ်ဆွေတွေကလည်း စာအသစ် မမြင်တွေ့၊ မဖတ်ရလျှင် ကျီစယ်တိုက်တွန်းသွားတတ်ကြသည်။ သူတို့၏ comment (မှတ်ချက်) တွေက စာတွေ ဆက်တိုက်ရေးဖြစ်စေဖို့ ကျေးဇူးတင်ချင်စရာ အားဆေးလည်းဖြစ်နေပြန်ရာ post (စာ) အသစ် မတင်နိုင်လျှင် ကိုယ့်ဘက်က တာဝန်မကျေသလို အားနာလျှက် စိတ်လက်မကြည်သာ ဖြစ်ရတတ်ပါသည်။
``ကိုယ်က လိုင်းပေါ်တက်ဖို့၊ post အသစ်တက်ဖို့ဆိုတာပဲ စိတ်စောနေတာကိုး။ တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်တန်သည် ...နားနားနေနေ၊ အေးအေးလူလူ တွေးချိန်လေးပေးပြီး ရေးမှပေါ့...။ ကိုယ်က ပို့စ်ရေးချင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ပို့စ်အသစ်တက်ချင်နေတာ....´´
နဒီပြောစကားက ကျိုးကြောင်းဆီလျော်နေသည် ထင်ပါ၏။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ နဒီသည် သူအား အချိန်ပြည့် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပျော်မောသာယာနေသူအဖြစ် ကြည့်မရပါဟု ဖွင့်ဟ၀န်ခံထားသော သူ့ချစ်သူလည်း ဖြစ်နေသေးသည်။ သူ့အား တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်တန်သည် လိုင်းပေါ်မတက်ဖြစိအောင် သွယ်ဝိုက်စည်းရုံးနေတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
``မစည်းရုံးပါဘူးနော်။ ဖြစ်နေတာ ကိုမြင်နိုင်အောင်၊ ဖြစ်သင့်တာကို တွေးမိအောင် ပြောပြတာ။ လက်ခံတာ၊ လက်မခံတာ ကိုယ့်သဘောအတိုင်းပဲ´´
အဲဒီနဒီက ရည်းစားကို ဟိုဟာမလုပ်ရ၊ ဒီလမ်းမသွားရဟု ဂဂျီဂဂျောင် မကျတတ်တာကြောင့် ချစ်စရာကောင်းနေတာဖြစ်သည်။ ခုတော့ သူလည်း တခြားမိန်းကလေးများလိုပင် တညောင်ညောင် ညည်းတတ်စပြုနေပြီ။
``သီးခံနိုင်သလောက် သီးခံနေမှာပဲ။ သီးမခံနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်လာရင်တော့ အပြတ်ပဲ´´
အဲသလိုတောင် ခပ်တည်တည် ခြိမ်းခြောက်တတ်နေခဲ့ပြီ။
``ညလေး တစ်နေ့လုံးငိုနေတာ သိလား´´
သူ..နဒီထံ စိတ်ရောက်နေဆဲ စကားစ အတန်ကြာ ပြတ်တောက်နေခဲ့ပြီးမှ တက်လာသော စာတစ်ကြောင်းကြောင့် တမင်လန့်ပြလိုက်ပါသည်။
``ချစ်သူနဲ့ စိတ်ကောက်လာလို့ ...ဟီး´´
``ကိုယ်တို့ ညလေးက ဆိုးတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ချက်စူဆိုးတာပဲ ဖြစ်ရမယ်´´
``that´s right ငါ့အစ်ကို တော်တယ်´´
သူ့ဘလော့ဂ်၊ ကိုယ့်ဘလော့ဂ် အပြန်အလှန် ၀င်ထွက်လည်ပတ်ရင်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မမြင်ဖူးပါပဲ စိတ်ချင်း ရင်းနှီးခင်မင်နေကြသူတွေမို့ ဖွင့်လက်စ စာမျက်နှာတွေကို ဒီအတိုင်းထားကာ အလိုက်သင့် ပြန်ပြောပေးနေရပါသည်။ သူမကလေး၏ ရင်ထဲက အကျိတ်အခဲလေးတွေ စကားပြောရင်း ပြေပျောက်သွားပါစေတော့။
``သူက ညလေးကို ဂရုမစိုက်တာ ကြာနေပြီ´´
`` QQ စိန်လား....´´
``အစ်ကိုနော် ...။ သူများ ချစ်ကလေးကို´´
``သူလည်း ညလေးတို့လိုပဲ။ သူ့ webpageကလေး အစ်ကို့ကို လင့်ခ်ပေးဦးမယ်။ အပျံစား အစ်ကိုရဲ့။ ကဗျာပို့စ်တွေလည်း အများကြီး...´´
``သူက သူ့webpage အတွက် အရမ်းဂုဏ်ယူတာ။ ညလေးကို သူ့ဆိုဒ်အကြောင်း အမြဲကြွားတယ်။ ညလေးကပြောလိုက်တာပေါ့။ ငါ့ကိုပေးရမယ့် အချိန်တွေ ငါမရပဲ အဲဒီ webpage မှာ ပုံအောပြီး တသသလုပ်နေတာကိုး လို့...´´
``ညလေးက တစ်နေ့ အချိန်နည်းနည်းပဲ လိုင်းပေါ်တက်ဖြစ်တာ။ သူကမှ ထမင်းမေ့၊ ဟင်းမေ့...။ ခါတလေ အိပ်ချိန်တောင်မေ့ပါတယ်ဆို...´´
နဒီသာ ကြားလျှင်တော့ သူ့ကိုပြောနေကျစကားအတိုင်း ``over´´ ပဲဟု ပြောဦးတော့မှာပင်။
``ကိုယ်...ဘယ်ကောင်မလေးနဲ့မှ Q နေတာမဟုတ်ဘူး နဒီရယ်´´
``သိသားပဲ..။ အဲဒီလူတွေကမှ ညပိုင်းတစ်ချိန်လောက် သူ့အချင်းချင်း ချိန်းပြီး ပုံမှန်ပြောကြတာ။ အချိန် အကန့်အသတ် ရှိသေးတယ်။ ကိုယ်က သူတို့ထက် ပိုးဆိုးနေလို့ ပြောနေရတာ´´
``အစ်ကို´´ ဟု တစ်ဘက်က တက်လာပြန်သည်။
``ညလေးရဲ့ webpage ကလေးကို အစ်ကို သဘောကျတယ်လို့ ပြောဖူးတယ်နော်´´
``နေဦး...။ အဲဒီ webpage ကလေး လက်ဆောင်ရတုန်းကတော့ ညလေးလည်း အရမ်းပျော်ခဲ့တာပေါ့။ အခုမှ မှားမှန်းသိတာ´´
`` ဟုတ်တယ်။ ညလေးကို webpage နဲ့ လဘ်ထိုးပြီး ချွေးသိပ်တာလေ။ ပြီးတော့ ပစ်ထားပြီး သူ့ဘာသာ သပ်သပ် အလုပ်ရှုပ်နေတာ``
သူ အင်တာနက်သုံးနေစဉ် ရုတ်တရက် ရောက်ချလာတတ်ကာ ပခုံးပေါ်မှကျော်၍ စာတွေလိုက်ဖတ်၊ ရယ်တတ်၊ ပြုံးတတ်ခဲ့လေသော နဒီရှိမနေတာ သူ...အများကြီးကံကောင်းလှပါသည်။
နဒီ့ကိုလည်း webpage တစ်ခုလောက် လက်ဆောင်ပေးရန် သူ စိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ခဲ့သေးသည်။
``လိုပါဘူး။ facebook တစ်ခုနဲ့တင် နဒီ့အတွက် လုံလောက်ပါတယ်´´
ဘလော့ဂ်ရေးနေကြသူ အားလုံးကတော့ facebook ကို သုံးဖြစ်သည် ဆိုရုံမျှသာ။ facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကိုယ်ပိုင် ဘလော့ဂ်စာမျက်နှာလောက် မပျော်ပါ။
အွန်လိုင်းပေါ်မှ သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်း.. .သူပြောသမျှ နားထောင်ပေးရင်း သူပါ ပျော်ရွှင်၊ ရယ်မောနေလေ့မြဲ ၊ သူညွှန်ပေးသော စာမျက်နှာတွေဆီ အရောက်သွားကာ စာတွေဝင်ဖတ်လေ့မြဲ ဖြစ်သော နဒီကတော့ ကိုယ်ပိုင် webpage တစ်ခုအတွက် အချိန်မပေးချင်ဟုဆိုကာ စိတ်ဝင်စားဟန်မပြ။
``ညလေးက သူ့ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောလိုက်တယ်´´
``အွန်လိုင်းပေါ် လုံးဝ မတက်ရဘူးလိုိ့..´´
`` အစ်ကိုက သူ့အကြောင်းဖြင့် မသိပဲနဲ့။ အဲလောက်ပြောထားမှ ဘယ်နှရက် နေနိုင်မှာလဲ သိလုိ့လား။ လူကိုလာချော့ရင်း၊ ဈေးဆစ်ရင်း တပတ်မှာ သုံးရက်၊ အဲလောက်ကနေစပြီး တစ်ရစ်ရစ်ပြန်တက်လာ... နောက်ဆုံးကျတော့ တစ်လမပြည့်ခင် ပုံမှန်စံနှုန်းပြန်ရောက်သွားဦးမှာ...ဟွန်း´´
`` အလုပ်ရှိသေးရင် သွားပါ´´
`` အင်း...ကိုယ့် ကောင်မလေးကို ပြေးချော့လိုက်ဦးမယ် bye´´
Posted by သတိုး at 6:36 PM No comments:
ကိုဇော်ဋ္ဌေး၊ မလေးဖြူနှင့် သူတို့၏ သားများ…..
ကိုဇော်ဋ္ဌေးနဲ့ မမွှေးကြူတို့ အိမ်ထောင်ကျတော့ နှစ်ယောက်စလုံး အသက်လေးဆယ်ကျော် ဒီမှာဘက်ဆီ သီသီစွန်းခဲ့ကြပါပြီ။ ခုဆို သူတို့နှစ်ယောက်အိမ်ထောင်သက်ပဲ ရှိလှပြီပေါ့..လေး၊ငါးနှစ်တော့…။ သားသမီးရူးလိုက်ကြတာ လည်း ပြောမနေနဲ့တော့။ ဒါပေမယ့် ကံဇာတာက သားတစ်ရာ၊ မြေးတစ်ဖြာ နေရဖို့ မျက်နှာသာမပေးခဲ့ဘူးထင်ပါရဲ့။
မမွှေးကြူကတော့ စကားစပ်ဆိုင်တိုင်း ကိုဇော်ဋ္ဌေး ကိုသာ ရန်လုပ်နေမိတော့တာပဲ။
``အောင်မာ….ငါ နောက်မိန်းမ ယူပြလိုက်ရမလား…´´
စကားနိုင်လုကြရင်း ရန်ဖြစ်၊ စကားများကြရတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်။
ကိုဇော်ဋ္ဌေးကတော့ ယောင်္ကျားသားဆိုတော့ သိပ်ကြီးခံစားစွဲလန်းမှု မရှိလှဘူးထင်ပါရဲ့။ မမွှေးကြူကတော့ မနေနိုင်ဘူး။စားစား၊ သွားသွား…အဲဒီချဉ်ခြင်းကို ဖျောက်မရနိုင်ဘူး။
မမွှေးကြူ ကုန်စိမ်းရောင်းတဲ့ ဈေးကလေးက နံနက်ရော..ညနေပါ တစ်နေ့လုံးရောင်းရတဲ့ဈေးလေးဆိုတော့ နေ့လည်၊နေ့ခင်းတွေမှာ ဈေးဝယ်သူက မရှိသလောက် ရှားပါးလှတယ်။အဲဒီအချိန်ဆို ဈေးသူဈေးသားတွေ တရေးတမော မှေးငိုက်၊အနားယူကြတဲ့ အချိန်ပေါ့။ ဆိုင်နားနီချင်း ကလေးအမေတွေ အေးအေးလူလူနှပ်နေချိန်မှာ မလေးဖြူတစ်ယောက် ကတော့ သူတို့တတွေရဲ့ သား၊သမီးအရွယ်စုံကုိ ထိန်းကျောင်းချော့မြူပေးရင်း တစ်နေ့လည်ခင်းလုံး အချိန်ဖြုန်းနေတော့ တာပင်။
ဒါလည်း မမွှေးကြူနဲ့ ကလေးအမေတွေ အကြောင်းအပေါင်းသင့်နေကြပါမှ…။ပြောလွယ်၊ဆိုလွယ်၊ စိတ်ဆိုး လွယ်ပြီး မေ့ပျောက်လွယ်တဲ့ မမွှေးကြူနဲ့ စကားအကျကောက်ပြီး ပုံကြီးချဲ့ ရန်ထောင်တတ်တဲ့ ဆိုင်နီးချင်းအမျိုးသမီးတွေ ကြားမှာ စကားတင်းဆိုခြင်း၊ ငြူစူစောင်းမြောင်းခြင်း၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာ အော်ဟစ်ရန်ဖြစ်ရခြင်းဆိုတာတွေကလည်း ခဏ.. ခဏ။ စိတ်ဆိုးနေတုန်းသာ အနိုင်မခံစိတ်နဲ့ မောင်းကုန်တင်၊ ခုန်ပေါက်အော်ဟစ်နေမိကြတာ…။ ပြောရင်းမောလာကြတော့ နှစ်ဘက်စလုံး စိတ်ဆိုးပြေချင်နေကြပြီ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘက်က စတင်ပြီး ပြန်လည်ခေါ်ပြောဖို့တော့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲ။ ပြန်လည်ပတ်သက်ခေါ်ပြောစရာ အကြောင်း တစုံတရာပေါ်ပေါက်လာခဲ့လျှင် ခပ်တင်းတင်း၊ကင်းကင်းနေလို့မရသူက စတင် အလံဖြူပြကြစတမ်းပဲလေ။
ဒါပေမယ့် အခါများစွာမှာတော့ အမှတ်အတေးနည်းလှသော မမွှေးကြူကသာ ပြန်လည်စတင်၊ ကမ်းလှမ်း ခေါ်ငင်ဖြစ်ရသည်ချည်းပင်။
ကိုယ်က သင်းတို့တတွေနှင့် မခေါ်မပြောရလျှင်လည်း အောင့်အည်းနေနိုင်သေးပေမယ့် သင်းတို့ ဥက ပေါက်သော တွတ်တီးတွတ်တာလေးတွေနဲ့တော့ ကင်းစိမ်းပြတ်တောက် မနေနိုင်ဘူးလေ။
…ဟု ဘယ်သူလေး လှမ်းခေါ်လိုက်မှာလည်းဟု နားစွင့်နေမိလျှက်သား။
``သူများ သားသမီးချစ်ရတာလည်း…. မပိုင် ၀က်မွေးဘ၀´´
တခါတရံ စိတ်နာချင်သလို ရှိသော်လည်း မမွှေးကြူ၏ ဆိုင်မှာ…၊အိမ်မှာ…ဘယ်တော့မှ ကလေးငိုသံ ၊ ရယ်မောချော့မြူသံတို့မစဲ။
``အဲဒီ မိန်းမလည်း တစ်နေ့၊ တစ်နေ့ …အဲဒီဝမ်းမနာတွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေတော့တာပဲ´´
ကိုဇော်ဋ္ဌေးက ငြိုငြင်သလို ဆိုလာခဲ့လျှင်……ကလေးလေးငယ်ကို မုန့်ဖဲ့ကျွေးရင်း ရောက်တတ်ရာရာတွေ မနားတမ်းရေရွတ် မြူချော့နေတဲ့ မမွှေးကြူက…..
``ဟုတ်တယ်…။အဲဒါ ဘာဖြစ်လဲ။ဘဘက သားကို မနာလိုဖြစ်နေတာလားလို့ ပြန်မေးလိုက်စမ်းပါ သားရယ်….´´
``သားလေး….။မေမေ့ သားလေးရေ….၊မေမေ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်လဲ ပြောပါဦး..´´
``အော်….အများကြီးချစ်တယ်။ ဟုတ်လား။ ကြည့်စမ်း လိမ္မာလိုက်တဲ့ မေ့သားလေး…..´´
ခေါင်းရင်းအိမ်က ဘကြီးငွေတစ်ယောက် နံနက်လေးနာရီဆို ဘုရားဝတ်တက်၊ အမျှအတမ်းပေးဝေးနေကျ။ ဒီနေ့နံနက်လည်း ကိုယ်လက်သန့်စင်ပြီး ဆီမီး၊ရေချမ်းကပ်လှူမယ်ရယ်လို့ ဘုရားကျောင်းရှေ့မှာ နေရာယူမိရုံရှိသေးတယ်။ မမွှေးကြူတို့အိမ်က အချိန်မတော် ကလေးချော့မြူသံကြောင့် အံသြသွားတယ်။ မောင်ဇော်ဋ္ဌေးတို့၊ မမွှေးကြူတို့ ကလေး မွေးစားလိုက်တယ်လို့လည်း မကြားမိပါဘူး။
ဇဝေဇ၀ါ အတွေးက နံနက်လင်းတော့မှ အဖြေပေါ်တော့တယ်။ကိုဇော်ဋ္ဌေးက မမွှေးကြူအတွက် သားခွဲအရွယ် ခွေးပေါက်စလေး တစ်ကောင် သူ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အိမ်က တောင်းယူလာပေးသတဲ့။
ပြောရလျှင်တော့ အဲဒီနေ့ကစလို့ ဘကြီးငွေအပါအ၀င် အ်ိမ်နီးချင်းတွေအားလုံး ကသိကအောင့်ဖြစ်ကြရ တော့တာပင်။
မမွှေးကြူက မြို့မကုန်စိမ်းဈေးမှ လက်ကားဒိုင်တွေဆီ နံနက်မလင်းမီ အရောက်သွားတော့မည်ပြင်ဆဲ….
``မေ့သားလေးရေ…၊ မေကြီးသွားတော့မယ်နော်။ အိမ်ကို သေချာစောင့်ထား။ ဘယ်သူမှ ၀င်မလာစေနဲ့ သိလား´´
သူတို့ အိမ်ထောင်တစ်သက် ဒီလိုပဲထားသွားနေကျအိမ်ကို အခုမှ စိတ်မချလေဟန်ဖြင့် မှာတမ်းတွေချွေနေ တော့တာဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို စော်ကားရာ ရောက်မနေပေဘူးလား။ ပြီးတော့ အိမ်ထဲမှာ ကိုဇော်ဋ္ဌေးတစ်ယောက်လုံးလည်း သက်ရှိရှင်လျှက် ကျန်နေသေးတာမဟုတ်လား။
``သားအဖေ အိပ်ပုတ်ကို နှိုးထားလိုက်ဦး။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင် မထွက်ခင် မေ့ဆိုင်ကို လိုက်လာခဲ့ဖို့လည်း သတိပေးလိုက်ဦး´´
မမွှေးကြူ ကုန်စိမ်းဒိုင်ကအပြန်ကုိ ဆိုင်ကြိုဖွင့်ထားနှင့်ပြီး စောင့်ရလေ့ရှိတာ ကိုဇော်ဋ္ဌေး၏ နေ့တဓူဝ ၀တ္တရားဆိုတာ တစ်လမ်းလုံး၊ တစ်ဈေးလုံးက အသိ။ မမွှေးကြူကို ဆိုင်ခင်းပေးပြီးမှ ကုိဇော်ဋ္ဌေးတစ်ယောက် လက်ဘက်ရည်ဆိုင် သွားရလေ့ရှိတာ…။ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကအပြန်… မမွှေးကြူထံ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်သွားပြီး မမွှေးကြူဝယ်ခြမ်းပေးလိုက်သမျှ ယူ၊ အိမ်ပြန် ချက်ပြုတ်ပေးထားရသည်။ ဈေးကွဲချိန်လောက်မှန်းကာ မမွှေးကြူကို အိမ်ပြန်စေပြီး ကိုဇော်ဋ္ဌေးက ဆိုင်စောင့်ပေးထားရပြန်တာလည်း ဆံချည်တစ်မျှင်စာပင် အချိန်မလွဲစေရ။
ခုတော့…ကိုဇော်ဋ္ဌေးအား ကြီးကြပ်စေညွှန်ဖို့ သူတို့၏မွေးစားခွေးကိုပင် တဆင့်ခံတာဝန်လွှဲအပ်နေပြန်တာ နားကလောစရာ…။
အိပ်ယာထဲမှာ ရသလောက် နှပ်နေချင်သေးသော ကိုဇော်ဋ္ဌေးကလည်း နားထဲသို့ဇွတ်တိုးဝင်လာသော မလေးဖြူ၏ ညံစာစာ၊ သံသာသာစကားတွေကြောင့် စည်းစိမ်လျော့ကျသည်ဟု စိတ်တိုနေပြီ။
``ဟေ့ကောင်…ခွေးမသား၊ မိုးမလင်းသေးဘူး..မင်းတို့သားအမိ အသံချည်းပဲ။ ဇိမ်ပျက်တယ်ကွာ…´´
မမွှေးကြူရဲ့ သားလေးက ပြည်တွင်းဖြစ်ခွေးတွေထဲမှာတော့ တသွေးတမွေးပဲပြောရမယ်။ အဆစ်အလျားက တိုတို၊ ၀၀ လုံးလုံးကလေးရယ်။ အမွေးဝါနုနုကလေးတွေကလည်း မြင်ဖူးနေကျ ပတ်ဝန်းကျင်ကခွေးတွေထက် ပိုမိုရှည်လျားပြီး စိုနုနေတော့တာ။
မမွှေးကြူက သူ့ခွေးကို သူ့အသည်းစွဲ ကိုရီးယားစတားတစ်ယောက်ရဲ့ နာမည်မှည့်ပေးလိုက်သေးတာ။ ကိုရီးယားပရိတ်သတ်က ဘယ်ငြိမ်နေကြပါ့မလဲ။ သောသောညံညံ ကန့်ကွက်လိုက်ကြတာ။ ကိုဇော်ဋ္ဌေးလည်း နားပူလာ တာနဲ့ …..
“ကဲ…ငြင်းမနေကြနဲ့။ ငါ့သားကို ငါကိုယ်တိုင် နာမည်ပေးမယ်”
…ဆိုပြီး “ရမ်ဘို”…တဲ့။ ထုံးစံအတိုင်း မမွှေးကြူနဲ့တော့ ငြင်းခုန်အော်ဟစ်ရသေးပေမယ့် အရပ်က သူတို့ ကိုရီးယားလေး ဘေးရန်ကင်းရင်ပြီးရောဆိုပြီး ၀ိုင်းထောက်ခံကြတော့ အများနဲ့တစ်ယောက်မို့ မလေးဖြူအလျှော့ပေး လိုက်ရတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုဇော်ဋ္ဌေးက သူစိတ်မလိုရင်တော့….
…အဲဒီလိုကျီစယ်တတ်ပြန်တာကြောင့် မမွှေးကြူနဲ့ ရန်ပွဲနွှဲရတာလည်း အကြိမ်ကြိမ်ပါ။
“ရှင် ကလေးကို မဟုတ်တန်းတလျားတွေနဲ့ ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့မပြောနဲ့နော်။ ဖေကြီးတော့ အမျိုးကျတော့ရော ကောင်းလို့လားလို့ ပြန်မေးလိုက်စမ်းသား…”
ခွေးနဲ့လှည့်တိုက်လာတော့ ကိုဇော်ဋ္ဌေး ပါးစပ်ပိတ်နေလိုက်ရတော့တယ်။
မမွှေးကြူကတော့ သူ့သားနဲ့ ပတ်သက်လာရင် နည်းနည်းမှမလျှော့တဲ့ အထဲကပါပဲ။ တလောက ကိုဋ္ဌေးဇော်ဖခင်ကြီး သူတို့အိမ်အလည်ရောက်လာခဲ့တော့…
“ဘဘကြီး နေကောင်းလား…မေးလိုက်ပါဦး သားရယ်။ ကြီးမေကြီးတို့ရော…အဆင်ပြေကြရဲ့လား လို့…”
“ဘဘကြီးကို ဦးတော် လုပ်ပြလိုက်ပါဦး..”
အဖိုးအိုခမျာ…မောမောပမ်းပမ်းကြားက စကားတစ်ခွန်းမှ ပြန်မဆိုနိုင်ရှာဘူး။
“ငါတုိ့ တစ်မျိုးလုံးလည်း ခွေးမျိုးဖြစ်ပါပြီ”
ရှုံ့ရှုံ့မဲ့မဲ့ ညည်းငြူရင်း ရေနွေးကြမ်းတစ်ခွက်တောင် ဖြောင့်အောင်သောက်မသွားနိုင်ရှာတော့ပါဘူး။
မမွှေးကြူ ကတော့ ကိုဇော်ဋ္ဌေးကိုတောင် တိုက်ရိုက်စကားဆိုတာ မ၇ှိသလောက် နည်းပါးသွားခဲ့ပါပြီ။
“သားကြီးရေ…။နင့်အဖေကို မှာလိုက်ဦး။ ညနေအိမ်စောစောပြန်ဝင်လို့။ ဘောလုံးပွဲပြီးမှ အချိန်မတော် အိမ်ပြန်လာရင် မေမေက အိမ်တံခါး ပိတ်ထားမယ်လို့”
“ခွေးမသားရေ…ဖေကြီးအိပ်ကပ်ထဲက ပိုက်ဆံ မင်းအမေနှိုက်ယူထားတာ မင်းမြင်တယ်မဟုတ်လား။ ပြန်တောင်းပေးကွာ။ ဖေကြီး လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ဖို့တောင်မရှိတော့ဘူးကွ။ လုပ်ပါကွာ မြန်မြန်လေး၊ မင်းအမေစိတ်မပြောင်းခင်…”
ဘာပဲပြောပြော သူတို့ အချင်းချင်းတော့ အဆင်ပြေနေတာပါပဲ။ အရပ်ထဲကတော့…“ခွေးတို့အဖေနဲ့ ခွေးတို့အမေ”…ဆိုပြီး တီးတိုးတီးတိုးပေါ့။ ဒါပေမယ့် မမွှေးကြူပဲ။
“ခင်ဗျားတို့ ကျွန်တော်စားသလို မစားနိုင်၊ မနေနိုင်တိုင်း မနာလို လိုက်ဖြစ်နေတာလားလို့ ပြောလိုက်စမ်းသားလေး”
ခုတော့ မမွှေးကြူနဲ့ ဖက်ပြိုင်ပြောရဲသူလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ မမွှေးကြူက သူ့စိတ်နဲ့ မတည့်ရင် သူ့နှုတ်က ခွန်းတုန့်ပြောချင်လာသမျှ စကားတွေကို ရမ်ဘို့ ပါးစပ်ထဲထည့်ပေးပြီး ရမ်ဘို့ပါးစပ်ကပဲ ထွက်လာတော့ သယောင် ပြောနေတာမို့ ကိုယ်ကပြန်ပြောလျှင် ကိုယ်တွေပဲ ရမ်ဘိုနဲ့ တုဖက်ပြိုင်ပြောရာ ရောက်သွားတော့မှာ မဟုတ်လား။
အဆိုးဆုံးကတော့ မလေးဖြူရဲ့ ကုန်စိမ်းဆိုင်လေးရှေ့ ဖြတ်လျှောက်ရတဲ့ဈေးဝယ်သူတွေပဲ။
“အန်တီကြီးရေ..၊ချဉ်ပေါင်တွေ လတ်တယ်။ အားပေးပါဦးလို့ ပြောလိုက်ပါဦး သားရယ်”
“ဈေးလျှော့လို့တော့ မရဘူးဗျာ။ သားမေကြီးမှာ သုံးစည်းမှ တစ်ကျပ်ပဲ အမြတ်ကျန်တော့တာလို့”
ကိုယ်က တစ်ကျပ်တစ်ပြားမြော်မြင်ပြီး ဆက်ပြောနေမိလျှင် ဘယ်အဖြစ်ရောက်သွားမလဲ …ကဲ။ ခက်တာက နေ့ဓဓူဝ ဈေးဝယ်ရပြီးဆိုမှတော့ မမွှေးကြူဆိုင်ရှေ့က မဖြတ်ပဲလည်း နေလို့မှ မရပဲ။အဲတော့…ကိုယ်တွေ သူ့ဆိုင်ရှေ့ဖြတ် လျှောက်မိချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ကို မမြင်၊မတွေ့၊ နှုတ်မဆက်အားလောက်အောင် မမွှေးကြူတစ်ယောက် အခြားဈေးဝယ်တွေနှင့် အလုပ်ရှုပ်နေပါစေဟုပဲ ဆုတောင်းရတော့မည်။
ဆိုင်နီးချင်းအမျိုးသမီးတွေမှာလည်း တစ်ဒုက္ခ။ နေ့လည်နေ့ခင်းတွေမှာ ကိုယ့်ကလေး သူ့ဆီထိုးပေးပြီး ကိုယ်ကတရေးမှေးငိုက်နေကျလေ။ ခုတော့ ကလေးထိန်း အကူမရတော့တဲ့အပြင် သူ့ခွေးကုိ တွတ်တီးတွတ်တာတွေ ပြောရင်း အနှောင့်အသွား မလွတ်သောစကားတွေနှင့် စောင်းလားမြောင်းလားပြောဆိုနေတာတွေကို အောင့်အည်းသီးခံ ရေငုံနေရတော့တဲ့အဖြစ်။
မမွှေးကြူက ကိုယ့်ကလေးကို တခါတရံ စိတ်လိုလက်ရရှိချိန်တွေ ခေါ်ယူထိန်းကျောင်း ချော့မြူလိုခဲ့ လျှင်တောင်….
ဖြစ်ပုံက ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်က ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ခြေသလုံးကို ဂျမ်ဘိုက အစွယ်နဲ့ခြစ်လိုက်မိတယ်။
အမှန်က ဒီရပ်ကွက်၊ဒီလမ်းထဲက ကလေးတွေအားလုံးဟာ မမွှေးကြူတို့အိမ်ကို ၀င်ထွက်သွားလာ လည်ပတ်နေကျပါ။ အဲဒီနေ့ကတော့ ကလေးတွေက ဂျမ်ဘို့ကို စ,ပြီးရှေ့ကထွက်ပြေးကြ၊ ဂျမ်ဘိုက နောက်ကလိုက်ရင်း မီရာကလေးတစ်ယောက်ကို ဖမ်းမိလိုက်ရာက ကလေးရဲ့ခြေသုံးသားက ဂျမ်ဘို့အစွယ်နဲ့ငြိသွားရော..။ကလေးကလည်း ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ ပြေးနေဆဲ အရှိန်ကိုမလျှော့လေတော့ အစွယ်ရာက မဆိုစလောက် များသွားခဲ့တယ် ထင်ပါရဲ့။
ကိုဇော်ဋ္ဌေးတို့၊ မမွှေးကြူတို့ဆိုတာ တစ်သက်လုံးက မသုံးနှုန်းဖူးတဲ့ လေသံနူးညံ့လေးတွေနဲ့ ကလေးမိဘ တွေကို မျက်နှာအောက်ချတောင်းပန်ရှာပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ဒဏ်ရာ ပကတိကောင်းမွန်တဲ့အထိ ဆေးဖိုးဝါးခ တာဝန် ယူဖို့ လည်း ရဲရဲအာမခံခဲ့ကြပါတယ်။
နေ့တိုင်း သတင်းမေး၊ ဓါတ်စာပို့ပေးရင်းနဲ့လည်း……
“ကိုယ့် ညီလေးကို ဗွေမယူပါနဲ့ သားလေးရယ်…”
…လို့တောင် မမွှေးကြူက နှစ်သိမ့်တောင်းပန်ခဲ့သေးတာပင်။ ဒီနေံနံနက်တော့..
မမွှေးကြူ အိပ်ယာကနိုးနိုးချင်း ထုံးစံမပျက် သားကိုအသံပြုတော့ အနားရောက်မလာ။ သူ့အိပ်ယာ ထဲမှာလည်းရှိမနေ။
သားပျောက်ပြီဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ မမွှေးကြူတစ်ယောက် နံနက်မလင်းမီ အဦးအဖျား ငိုပစ်လိုက်သေးသည်။ လင်မယားနှစ်ယောက်သား ဈေးမသွား၊ ဆိုင်လည်းမထွက်ဖြစ်ကြတော့ပဲ ရမ်ဘုိ ရှာပုံတော်ဖွင့်ကြသည်မှာ တစ်လမ်းလုံး အုန်းတသဲသဲ။ နံနက်လင်းလေမှ အိမ်နှင့်ခပ်လှမ်းလှမ်း ၊လမ်းသွယ်ကလေးတစ်ခု၏ နံဘေးမှာ ရမ်ဘို့ကိုတွေ့တော့သည်။
သွေးအလိမ်းလိမ်း၊ အသက်ငွေ့ငွေ့သာကျန်တော့သော မမွှေးကြူ၏သားကလေးက မမွှေးကြူကို မှတ်မိနေသေးသလို တအိုင်အိုင်အော်ညည်းရင်းကနေ မျက်စေ့မှိတ်သွားတော့တာ…။
မမွှေးကြူကတော့ လူသေသလိုကို သဲသဲလှုပ်လှုပ် အော်ဟစ်ငိုကြွေးမိတော့တာပင်။
“ခွေးအကြီး တစ်ကောင်ကောင် အနိုင်ကျင့်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့”
မမွှေးကြူကတော့ မယုံနိုင်ပါ။ အနိုင်ကျင့်တဲ့ ညည်ဆိုးက လူတွေမှာ ပိုလို့များတာ…..။
ငိုနေလျှက်က လမ်းထဲရှိသမျှ ဟိုလူ၊ ဒီလူ ထင်မြင်ယောင်မှား သိမ်းကျုံးရမ်းပစ်လိုက်သေးသည်။
အဲဒီညနေမှာတော့ မျက်ရည်မခြောက်သေးသော မို့အစ်နီရဲမျက်နှာနှင့်ပင် မမွှေးကြူတို့လင်မယားက ရမ်ဘို့အတွက်ရည်စူးကာ လမ်းထဲရှိကလေးငယ်တွေကို သာကူယာဂုတိုက်ခဲ့လေသည်။
အခု မမွှေးကြူတို့ရဲ့ တတိယမြောက်ခွေးကလေးအမည်က “ဆူမို”…တဲ့။ ။
Posted by သတိုး at 10:37 AM 1 comment: